Kungani Kufanele Utshale imali ku-infographics ngokushesha | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 25, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Our agency ithuthukise ngaphezu kwe-100 infographics futhi, kude, a isu elinamandla lokho kuyaqhubeka nokuba yimpumelelo kuwo wonke amaklayenti esiwakhethele wona. Manje sesibenzela izinhlangano eziningi futhi ukunweba iminikelo yabo kumakhasimende abo.
Amabhizinisi ashicilela #infographics ane-12% enkulu yevolumu yethrafikhi. Ngokusho kocwaningo olwenziwe ngu Igrafu.net
I-infographics inezinzuzo ezidlula iningi lamasu wokuqukethwe:
Ukuqonda - uma yenzelwe futhi yenziwa kahle, i-infographics inikeza imininingwane ngefomethi engasetshenziswa kalula.
Igciwane - ngoba kumane kungumfanekiso omkhulu, ama-infographics akopishwa kalula futhi abiwe kuyo yonke iwebhu.
Ukucinga - uma kwabiwa, zivamise ukukhiqiza izinkomba ezifanele kakhulu zibuyela kumdali, zikhulise igunya lazo lesizinda ngezinjini zokusesha.
Ukubambisana nenhlangano enkulu ye-infographic kuyisihluthulelo sempumelelo yakho. I-infographic eyenziwe kahle idinga ucwaningo, ukuthuthukiswa kwezindaba, ukwakheka, ukubizelwa esenzweni, kanye nokuphakanyiswa ukuze kutholakale ngokugcwele amandla ayo. I-infographic eyenziwe kahle inganikeza izinyanga noma ngisho neminyaka yomgwaqo ofanele kakhulu kusayithi lakho.
Qiniseka ukuthi i-ejensi inolwazi embonini yakho. Ukugxila kwethu bekukwi-infographics egxile kakhulu kwezobuchwepheshe noma kwezentengiso. Sinenzuzo enkulu esiyitholayo ukuyikhombisa lapha kubhulogi ye-Marketing Tech ukunweba ukufinyelela kwabo.
Oda i-Infographic Namuhla!
Ungathathi izwi lethu ngakho, ochwepheshe be-infographic ku I-Neoman yakhele futhi yathuthukisa le infographic yokuthi kungani zisebenza kahle kangaka. INeoman ikhiqiza ama-infographics amnandi - qiniseka ukuthi ubheka lawo iphothifoliyo bese uchofoza kule infographic engezansi ukuze buka inguqulo exhumanayo:
Tags: i-infographic agencyukwakheka kwe-infographicI-infographics esebenzayoI-Marketing Infographicsneomanoda infographics